ụlọ oyi akwa site na oyi akwa
nkwanye waya, curl curl
na -agwọ ọrịa
Nnwale nrụgide hydrostatic 1.5 oge
mgbanwe nke njikọ mmụba roba nwere njikọ ndị nwere eriri
mpụta na mwegharị ngagharị axial
Otu Njikọ Mgbasa Mgbasa Rubber
Ugboro abụọ Mgbasa Mgbasa Rubber
Nnukwu Njikọ Mgbasa Mgbasa Rubber
Spool Ụdị Njikọ Njikọ Mgbasa Rubber
Rubber Pipe njikọ
Nkà na ụzụ na -akwado
Ntụle anụ ahụ na kemịkal na -atụnyere
Akụkụ Flange Standard
Nwụnye na ntuziaka Ntuziaka
Enwetara nkwado nke “Attestation de conformité sanitaire” (ACS) na France na Septemba. 29,2021
Nke a bụ asambodo ACS anyị, nke bụ maka nkwonkwo mmiri mmiri roba na France. Anyị wee mee nnwale a site na Ọgọst 20, 2020. Anyị wee nweta asambodo ahụ na Septemba, 29,2021.
Ọkt.13-14 Onye na-azụ ihe French na-eleta ihe ncheta
Obi dị anyị ezigbo ụtọ na ụlọ ọrụ ha na-azụta ndị mmadụ bịara ụlọ ọrụ anyị na Ọktoba 13-14, ha nwekwara ọmarịcha ụlọ ọrụ anyị. Nke a bụ nleta nke abụọ ha. Ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ nke nkwonkwo rọba, anyị nwere okirikiri okpukpu abụọ na otu rọba. Na ihe roba bụ NB ...
Njirimara Rubber na Njikwa ụcha
Rubber gụnyere otu abụọ: rọba eke na roba sịntetik. A na -eji rọba mee ahịhịa rọba na ahịhịa roba, na monomers dị iche iche na -enweta roba. Osisi rọba ndị mbụ toro na South America ...
Anyị mepụtara teknụzụ ọhụrụ nke njikọ roba - nkwonkwo roba na -enweghị oghere oghere
Nsogbu ikuku n'ime usoro mmepụta roba na -abụkarị isi ihe nke usoro ịkwa iko. N'otu oge ahụ, oghere oghere dị na ngwaahịa emechara na -emetụta ọdịdị ngwaahịa ahụ nke ọma, ndị ọrụ ga -ejikwa aka belata oghere ikuku na ...
“Attestation de conformité sanitaire” (ACS) nkwado France amalitela na Ọgọst 2020.
“Attestation de conformité sanitaire” (ACS) bụ asambodo mmiri ọ drinkingụ Frenchụ French nke na -egosi ịdị mma ngwaahịa ga -abata na mmiri ezubere maka oriri mmadụ. N'ọnwa Ọgọst 2020, dabere n'ihe onye na -azụ ahịa chọrọ, anyị ahaziri ...
Na June a, nkwonkwo roba EPDM anyị agabigala ule nke Singapore SETSCO.
Testzọ nnwale: SS 375- Ọdịmma nke ngwaahịa na-abụghị nke nwere ike iji mee ihe na kọntaktị na mmiri ezubere maka oriri mmadụ gbasara mmetụta ha nwere na ịdị mma nke mmiri. 1) Nkebi 1: Nkọwapụta 2) Nkebi 2: Ihe nlele maka inwale 3) Nkebi 2: 2: 1: Od ...
Na Julaị.2, 2019, anyị nwetara asambodo CE.
Na Julaị.2, 2019, anyị nwetara asambodo CE. Ngwaahịa ndị dị mkpa bụ mgbatị na-agbanwe agbanwe vulcanized roba, ihe EPDM n'okpuru nkọwapụta EN681-1 1996. Akuko Mba .: HST-JNLR2119062045 Ihe owuwu zuru ezu dị ka ndị a: Otu ụdị flange dị elu welitere ihu/ewepụghị ihu ...
Na June 14th nke 2019, anyị enwetara asambodo Wras.
Mmiri ọableụ potụ a dị ezigbo mkpa maka ahụike ndị mmadụ. Mmetọ mmiri bụ isi ihe na -emebi ahụ mmadụ. Ịkwalite ịdị mma nke mmiri ọableụableụ dị mkpa na nke kacha mkpa. Ọtụtụ mgbe, usoro nke imezi mmiri ọableụ areụ dị ka ndị a: Nchedo ...
Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị maka arịrịọ na aro gị niile.
Email anyị, kpọọ anyị ma ọ bụ jupụta n'okpuru Akwụkwọ nyocha. Anyị ga -alọghachikwute gị n'ime awa 24.